60 TAONAN'NY FANDRAHARAHANA NY FONJA
Hatomboka amin’ity taona ity ny fananganana fonja vaovao, araka ny nolazain'ny Praiministra. Ankoatra izay, nanome toromarika ihany koa ny lehiben'ny Governemanta mba hanafainganana ny fitsarana ireo miandry izany any am-ponja ary hamafisina ny fampitaovana.
Saika efa antitra avokoa ny ankamaroan'ny fonja manerana ny nosy. Tsy vitan'izay fa efa mihoatra ny tokony ho zakany ny isan'ny voafonja, eo ihany koa ny tsy fahampiana ara-pitaovana toy ny fiara ka mampanano-sarotra ny asan'ireo mpandraharahan’ny fonja.
Manoloana izany, nilaza ny Praiminisitra Ntsay Christian omaly, nandritran’ny ivon'ny fankalazana ny faha-60 taonan'ny fandraharahana ny fonja fa mila hampanarahina ny toetrandro ny fonja eto Madagasikara. Ka hanomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana fonja vaovao manerana ny faritra rehetra. Mifanindran-dalana amin’izay anefa dia nanome toromarika ihany koa ny Praiministra mba hanafainganana ny fitsarana ireo gadra maro be mbola miandry ny fitsarana azy ireo. Nanome toky ny hamahana ireo olan'ny mpandraharaha ny tomponandraikim-panjakana saingy mitaky kosa ny fahamendrehan'ireo mpiasan'ny fandraharana ny fonja.
Ankoatra ireo ezaka rehetra ireo dia nolazain'ny Ministry ny Fitsarana Jacques Randrianasolo koa fa hametrahana “camera de surveillance” ny fonjan'Antanimora sy Tsiafahy. Nitohy omaly ny ivon'ny fankalazana ny faha-60 taonan'ny fandraharahana ny fonja, izay nifanandrify tamin’ny andro nankalazana ny tsingerin-taona nahaterahan'i Nelson Mandela. Tanjona ny hampahafantarana ny besinimaro ny andraikitry ny mpandraharahan’ny fonja. Hetsika ara-panatanjahantena sy fampirantiana no anamarihana izany fankalazana izany. Vahiny nasaina manokana tamin’ity faha-60 taonan'ny fandraharahana ny fonja izao ny Tale Jeneralin'ny fandraharahana ny fonja avy any Burkina Faso.